Perihal Perkembangan Asuransi | Alexapagerankcheckerblog
July 18, 2018 Alexapagerankcheckerblog
Perlindungan Maksimal dari Allianz Allisya Protection Plus Inishuwarenzi inzira inodzivirirwa kubva mune mari. Icho chimiro chekuchengetedzwa kwemungozi, kunyanya kushandiswa kurwisana nehutano hwekukanganiswa kana kutadza kusanzwisisika. Rimwe sangano rinopa inshuwarisi inozivikanwa sewe inshuwarisi, kambani ye inshuwarisi, inshuwarisi yekutengesa kana munyori wepasi. Munhu kana sangano rinotenga inshuwarheni inozivikanwa seye inshuwarisi kana seanotsigira. Inoshuwaridho yekutengeswa inosanganisira bhizinesi inofunga kuti kurasikirwa kwakagadziriswa uye kuzivikanwa kwechidiki nenzira yekubhadhara kune inshuwarheni mukutsinhanisa kune vimbiso yemubhizimisi yekubhadhara vakatsigirwa kana paine kurasikirwa kwakavigwa. Kurasikirwa kunogona kuve kana kusingave mari, asi inofanira kuderedzwa kumatongerwo emari, uye kazhinji inosanganisira chimwe chinhu umo inshuwarisi ine chido chisingavimbisi chinotarisirwa nehuwandu, hune, kana hukama hwepreexisting. Iyo inshuwarisi inogamuchira chibvumirano, inonzi inshuwarisi, iyo inotaura nezvemamiriro ezvinhu uye mamiriro ezvinhu ayo inshurensi ichabhadhara vakatsigirwa. Perihal Perkembangan Asuransi
Perihal Perkembangan Asuransi Mari yepamusoro inopomerwa ne inshuwarisi kune iyo inshuwarisi yekuvharidzirwa yakarongwa muinishuwarenzi inonzi premium. Kana bhizinesi ichirasikirwa nekurashikirwa kunogona kuvharwa neinishuwarenzi, iyo inshumbisi inokumbira kudai inshurensi yekugadziriswa neanenge achida kugadzirisa. Iyo inishuwarenzi inogona kuvharira panjodzi yako pachayo nekubvisa reinsurance, iyo imwe kambani yveshuwarenzi inobvuma kutakura zvimwe zvengozi, kunyanya kana iyo inshurensi yekutanga inowona dambudziko rakakura kwazvo kuti riitakure. Nzira dzekutumira kana kugovera njodzi dzaive dzichiitwa nevatengesi veChinese neBabiloni kare kare semakore matatu uye 2 BC, pamwe chete.1 Vatengesi vechiChinese vanofamba vachifamba nemvura zhinji vanoparadzanisa zvipfeko zvavo mumidziyo yakawanda kuti vadzivise kurasikirwa kwechimwe chekudzivirira kwemudziyo mumwe chete . VaBhabhironi vakagadzira hurongwa hwakanyorwa mumutemo unozivikanwa weHammurabi, c. 1750 BC, uye yakaitwa nevatengesi vokutanga veMediterranean. Perihal Perkembangan Asuransi